Khangisa lapha | Izindaba ze-IPhone
Uma ibhizinisi lakho ligxile ekuthengisweni kwe-iPhone, iPod Touch, izesekeli kanye / noma izinhlelo zokusebenza zombili imikhiqizo noma olunye uhlobo lwedivayisi yeselula noma izinsizakalo ezihambisanayo, Izindaba ze-IPhone kuyithuba elihle lokufinyelela kumakhasimende akho.
I-Actualidad iPhone yiwebhusayithi eyinhloko ezinikele ku-100% ku-iPhone I-Apple ngeSpanishi. Finyelela kubathengi abangaba khona abafuna ulwazi mayelana ne-iPhone.
Nyanga zonke sinokuningi kunoku Ukubukwa kwamakhasi ayisigidi esingu-2,5 yabasebenzisi abanentshisekelo ku-iPhone nezinsiza zayo. Ngokukhangisa imikhiqizo yakho kanye nezinsiza kuwebhusayithi yethu, uzofinyelela izigidi zamakhasimende ezingaba khona ngokushesha futhi ngokushibhile.
Ukuxhumana nathi ngezinkinga zokukhangisa sebenzisa ifomu elilandelayo: